Rita, Writing for My Sake!: လွမ်းတဲ့ မှတ်တမ်း
Posted by Rita at 10/13/2009 12:16:00 AM
(မနာလို၊ အားကျ၊ မုဒိပွား)စွာနဲ့
ရိုးရိုးလေးလေးပုံဖော်ပြပေမယ့် အချစ်တစ်ခု တကယ် အသက်ဝင် လာခဲ့သလိုပဲ ...
ကျေးဇူးဗျာ .. သူ့ကို ပြောဖို့ မေ့နေတဲ့ စကားတစ်ခွန်း အမှတ်မထင် တွေ့ခဲ့ရတယ်
မြင်အောင်ကြိုးစားပြီး ကြည့်တယ်။ နဲနဲခက်တယ်။ ကိုယ့်ရီးစားတွေက မိုးရွာထဲမှာ အဲလို လမ်းရှောက်လေ့မရှိဘူး။ ဟဲဟဲ
အချိန်တွေ အကြာကြီး တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေစေခဲ့တာကို ခွင့်လွှတ်ပါ။
အချိန်တွေ အကြာကြီးတွေဝေခံ လို့ပါ
အဲလေ ဝေးဝေးမပြေးဘာနဲ့ တခါတည်းခုန်ဝင်လိုက် ရင်ခွင်ထဲကို...ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းဆိုရင်ပြောပါတယ် ..ပိန်ရင်တော့သွားမလုပ်နဲ့ အုံး ..ဟိဟိ
( အရင်ကထက်ပိုချစ်မှာပါ ရီတာရယ် )
အပေါ်ဆုံးက Anonymous, မဟုတ်မှလွဲရော NT များလား :D
Eleven, ပြောစရာ စကားတော့ ရသွားတာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ စကားလုံးတွေဆိုတာ ခံစားရတာကလွဲလို့ ဘာမှလဲ ဖြစ်မလာပါဘူး။ :)
Steve, မိုးရွာထဲ လမ်းမလျှောက်ဖူးသေးဘူးဆိုရင် လူဖြစ်ကျိုးမနပ်သေးဘူး ဆိုရမယ်။ ;)
ဖြိုးမော်, လုပ်သလို မဖြစ်နိုင်တာတွေ၊ ဖြစ်သလို မလုပ်နိုင်တာတွေ...
မင်း ကိုယ်တိုင် ကြုံလာရတဲ့အခါမှာ သိလာလိမ့်မယ်။ :)
vista, အင်း သူ စိတ်ကူးယဉ်နေပြီ။ ကိုယ်ရေးထားတာ အဲဒီစုံတွဲထဲက ကောင်လေးပုံစံကိုနော်။
The tall boy in your article applied the common word " Ladies first".
ဖြစ်ချင်တာတွေ ကိုစွတ်မြင်ယောင်နေတာ ကို
အီလူရှင်း လို့ခေါ်မယ်ထင်တယ်နော် အဟိ
ယုမော် က ထီးမဆောင်းတတ်လို့ပါတဲ့လေ
ရှင်မြင်ခဲ့တဲ့ မြင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ့်
ဗလ ထွားထွား ဒေါင်ကောင်းကောင်းနဲ့ကော်ငလေးကတော့ ထီးဆောင်းတတ်ပုံရပါတယ်လေ
addy, ဒုက္ခပါလား သူများအတွဲကို မြင်လာတာကို ရေးပါတယ်ဆို မြင်တယ်လို့ ထင်တယ်ပဲ ဖြစ်ရသေးတယ်
ညီမရေ… အမလဲ အဲလို အတွဲလေးတွေ ကြင်ကြင်နာနာ( သိပ်လွန်လွန်ကဲကဲ ကြင်နာတာတော့ မကြိုက်ဘူး) ရှိကြတာ တွေ့ ရင် ကြည်ကြည်နူးနူး ကြည့်မိတတ်တယ်… ပြီးတော့… ဟိုးအနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကို စိတ်ကူးထဲပြန်ရစ်လို့ ပေါ့… သေချာတာက သူတို့ သမီးရီးစားပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်… လက်ထပ်ပြီးရင် ဒါမျိုးတွေ အချိန်မရှိတော့ဘူးလေ… အိမ်ကို အမြန်ပြေး ချက်ရပြုတ်ရ သန့် ရှင်းရေးလုပ်ရနဲ့တခါတလေ သူ့ ဆံပင်ကြီးရှည်နေတာတောင် သတိမထားမိဘူး… သူကတော့ ကိုယ်အကျီင်္အသစ်ဝတ်ထားတာတောင် မသိလိုက်ဘူး(ကောင်းတဲ့ ဘက်ကလှည့်တွေးရင် အကျီင်္တွေ အများကြီးဝယ်လို့ ရတယ်)….
လွမ်းရတဲ့ ရက်တွေ လွန်ပါစေ...
ရီတာ လွမ်းတော့ တို့များ စာတွေ ဖတ်ရတယ်...သီချင်းလည်း နားထောင်ရတယ်...(အမကြီးတွေ မတရားဘူးနော်)
မြစ်တခုမှာ ရေနှစ်ခါမစီးဘူး ဆိုတဲ့ စကားပုံ ရှိတယ်နော်
ရေးထားတာ ကိုယ်ပါရောပြီး မျက်စေ့ထဲမှာ မြင်လာတယ်... အင်းးးးးးး ချစ်စရာ မြင်ကွင်းလေးပါပဲ...
ပြီးတော့ တန်ခူးပြောတာ တော်တော် သဘောကျသွားတယ်...။
သူကတော့ ကိုယ်အင်္ကျီအသစ် ဝတ်ထားတာတောင် မသိလိုက်ဘူး... ကောင်းတဲ့ဘက်က လှည့်တွေးရင် အင်္ကျီတွေ အများကြီးဝယ်လို့ ရတယ် တဲ့...ဟုတ်နေတာပဲ...